Enwere m ike iwelie m Amazon ahịa n'usoro na backend keyword njikarịcha?
Azịza dị mkpirikpi bụ ee, ọ ga-ekwe omume iwelie ahịa ahịa Amazon na backend keyword njikarịcha. N'ezie, mgbe a na-edozi ya n'ụzọ ziri ezi. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-ekenye ụfọdụ ihe ọmụma nkà mmụta sayensị ka ọ dị mkpa iji mezuo ọnụahịa Amazon gị - site na iji isi isiokwu gị dị iche iche na mpaghara azụmaahịa nke aha Microsoft kpọrọ "okwu ọchụchọ. "N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịchọta ihe ndị ka njọ, ma e jiri ya tụnyere ndị sliced ​​ndị gị na-eme mkparị na-eleghara nke a anya n'ezie ka ị nwee ike ịmalite ịmalite ahịa nke Amazon - ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla, ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Ya mere, n'okpuru m ga-egosi gị otu esi arụpụta na ebuli gị Amazon ndepụta site na backend isiokwu ngalaba.
Atụmatụ maka Backend Keywords Optimization
Ị maara na e nwere usoro setịpụrụ ederede nke Amazon - kpọmkwem maka ndepụta ngwaahịa gị nke mpaghara azụ azụ? Nwee ihe niile na ebe a site na ndị na-esonụ, na a ga-enwe ihe ọzọ dị mma dị mma maka A9 iji mụbaa Amazon ahịa ọkwa.
Ikwesiri iji oghere iji wepu okwu nke obula n'ime mpaghara nke gi na ndi ozo.Ekwuru m na a gaghị ekwe ka akara ọ bụla ọzọ dị ka akara ma ọ bụ semicolons gafere ebe ahụ.
A ghaghị ịkọwa mkpụrụ okwu ọ bụla ma ọ bụ okwu ọchụchọ ogologo-ọdụ na usoro doro anya, dị n'usoro ka e wee gosipụta ha n'ụzọ zuru ezu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na okwu doro anya dị ka "nnukwu kapeeti uhie" dị mma, ihe ọbụla dịka "nnukwu kapepe uhie" agaghị adị mma maka ndepụta ngwaahịa gị.
I nweere onwe gị iji mmebi nke ọma (dịka ọmụmaatụ, aha akwụkwọ, ihe nkiri, wdg. ), nakwa nke ọ bụla ọzọ a nabatara na nke ọzọ.
Ihe Kwesịrị Ịhapụ
O nwere ike iyi ka ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla, ma jide n'aka na ịnweghị ihe ọ bụla na-adịghị mkpa, nke na-ezighị ezi ma ọ bụ nke na-eduhie eduhie nke gụnyere n'ime gị ndepụta ndepụta azụ "okwu okwu. "Ekwuru m na ị gatụghị ịdepụta ndepụta ngwaahịa gị n'igbe a na-adịghị ahụkebe, jiri okwu na-ekwesịghị ekwesị (site na gburugburu ya), okike na-ezighị ezi, na ihe ndị ọzọ.
N'iji UPC, ihe ASIN, aha ngwaahịa ma ọ bụ ihe nchọpụta ọ bụla ọzọ bụ ihe na-adịghị achọ ka a hụ gị maka isiokwu ọchụchọ azụ gị n'ebe ahụ.
Ịmepụta ọdịnaya ọ bụla ogologo oge ga-eme gị ihe nhụsianya, kama iwelie ọkwa Amazon gị.
Iji okwu onwe onye dị ka "àgwà dị ịtụnanya," ma ọ bụ okwu nkwalite ọ bụla ọzọ n'ihu ọha na okwu ndị dịka "mma kacha mma," "ọnụ ala" adịghị atụ aro ya.
Otu ihe ahụ bụ banyere nkwupụta oge ọ bụla, dịka "na ire ere," "ngwaahịa ọhụrụ dịnụ," "ngwaahịa dị ntakịrị," wdg.
Ozi ọ bụla na-akpasu iwe ma ọ bụ ikwu okwu banyere ụdị mkparị na-emechibidoro.
Ebumnuche nke ebumnuche nke aha aha ọ bụla a na-edeghị aha bụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị echiche ọjọọ (ọ bụrụgodị na okwu ndị a ma ọ bụ okwu ndị a bụ mkparị dị oke egwu).
Gụnyere ntụgharị ọkpụkpọ ọ bụla, dịka ụdị dị iche iche ma ọ bụ ụzọ dị iche iche nke capitalization agaghị agụta maka uru gị Source .